Zaza iray Amin’ny Telo Maneran-tany No Tsy Manana Soram-piankohonana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Oktobra 2013 23:54 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Magyar, Français, Ελληνικά, Nederlands, polski, Italiano
Sary avy amin'ny BRAVO!
Amin'ireo zaza 150 tapitrisa teraka isan-taona, ny 51 tapitrisa – mihoatra ny iray ampahatelony – no tsy nanaovana soram-piankohonana. Iray amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana efatra dia manana taham-panoratana ny zaza teraka latsaky ny 50 isan-jato. Mazàna ny zaza tsy manana soram-piankohonana no tsy afaka mandeha any an-tsekoly na mahazo fitsaboana ary mora lasa zaza miaramila na miasa iharan'ny fanararaotana.
Saingy ny Fikambanan'i Masindahy Giles (Comunità di Sant'Egidio amin'ny teny Italiana), fiombonana Katolika ho an'ny olona Laika izay miasa ho an'ny mahantra, dia miezaka manova izany. Ilay vondrom-piarahamonina dia nanangana ny tetikasa BRAVO!, izay midika hoe Birth Registration for All Versus Oblivion [anglisy] (fanoratana ny zaza teraka mba hiadiana amin'ny fanadinoana), mba hampiakarana ny taham-panoratana ny zaza teraka any amin'ny faritra maro any Afrika, Azia ary Amerika Latina. Iray ao anatin'ny finiavana maro, toa ny tetikasa DREAM [anglisy] miady amin'ny SIDA izay nasongadin'ny Global Voices tamin'ny Aogositra 2013, izay sahanin'ny Fikambanana izy io.
Vao tsy ela izay, ny Global Voices dia nitafa tamin'i Evelina Martelli, lehibe mpitantana ny BRAVO!, momba ny tetikasa, ny toerana iasany, ary ny antony maha-zava-dehibe ny fanoratana ny fahaterahana.
Global Voices (GV): Inona ny tetikasa BRAVO ary ahoana ny fomba nipoirany?
Evelina Martelli (EM): Ny tetikasa BRAVO! dia aingam-panahy avy amin'ny zavatra niainan'ny Fikambanan'i Sant'Egidio raha niaro ny fiainan'ny ankizy ary ny fanajàna ny zon'izy ireo izy. Any amin'ny firenena afrikana sy aziatika maro, ny mpikambana ao anatin'ilay Vondrom-piarahamonina dia nahatsikaritra fa matetika ireo zaza nampian'izy ireo dia tsy nanana akory na dia kopia nahaterahana aza, ary niteraka olana goavana tamin'ny fiainan'izy ireo izany toy ny tsy fahafahan'izy ireo misoratra anarana eny an-tsekoly na mahazo fitsaboana araka ny tokony ho izy. Rehefa misy ady, tsikaritray fa ny zaza tsy manana kopia nahaterahana dia mora lasa voaray ho zaza miaramila. Matetika ireny zaza ireny dia ampiasaina amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany sy amin'ny fambolena noho ny mpampiasa azy ireo izay tsy afaka enjehana ho mpampiasa zaza satria sarotra ny manaporofo ny taonan'ireo zaza ireo.
BRAVO!, izay midika hoe Birth Registration For All Versus Oblivion (fanoratana ny zaza teraka mba hiadiana amin'ny fanadinoana), dia tetikasa natsangan'ny Fikambanan'i Sant'Egidio mba hiantohana ny fanaovana kopia nahaterahana ho an'ny zaza rehetra. BRAVO! dia manandratra sy mamporisika ny fanoratana ny zaza vao teraka ary mamaha ny olan'ny zaza tsy voasoratra amin'ny alalàn'ny fanaovana kopia nahaterahana ho an'ireo tara. Mampahafantatra ireo ray aman-dreny sy ankizy ny maha-zava-dehibe ny kopia nahaterahana ny Fikambanana ary manazava ny fomba arahana hanoratana maimaim-poana ny zaza teraka. Izy koa dia mamporisika ny fanatsaràna ny sampandraharaha misahana ny fanaovana kopia nahaterahana amin'ny alalàn'ny fanofanana ny mpiasa mpandray ny fisoratana, fampivoarana ny tontolo iasan'izy ireo ary fanamboarana birao akaiky ny trano fonenan'ny mponina. Ny Fikambanana dia manampy amin'ny fanafoanana ny antony lehibe mahatonga ny fanondranana olona, ny fanandevozana ary ny fampiasana zaza.
GV: Inona no maha-zava-dehibe ny fanoratana ny zaza teraka amin'ny ho avin'izy ireo?
EM: Ny fanoratana ny fahaterahana dia fanekena ara-ofisialy ny fisian'ny olona iray. Izany dia zo fototry ny olombelona araka ny Andininy faha-7 amin'ny fifanarahana eo anivon'ny Firenena Mikambana momba ny zon'ny ankizy.
Ny ankizy tsy voasoratra dia tsy afaka arovan'ny Fanjakana amin'ny lafin'ny ara-dalàna, ara-tsosialy ary ara-ekonomika na koa hisitraka ireo tolotra avy aminy. Tsy afaka mahazo fitsaboana, ohatra, izy ireo, na mandeha any an-tsekoly, na mahazo diplaoma.
Ireo izay tsy manana ny maha-izy azy ara-dalàna dia mora iharan'ny fanararaotana amin'ny alalàn'ny fampiasana, fanandevozana, fanondranana olombelona, fivarotan-tena, fanerena hiasa na fidirana ho zaza miaramila. Raha nahavita heloka izy ireo dia raisina ho toy ny olon-dehibe ary tsy mitovy amin'ny fitondràna ny ankizy ny fitondràna azy ireo, ohatra hoe alefa amina efitra tsy miaraka amin'ny olon-dehibe.
Noho ny fananana kopia nahaterahana, rehefa lehibe izy ireo dia afaka mandray anjara amin'ny fiainana ara-demokratikan'ny firenen'izy ireo, mifidy ary milatsaka ho fidiana. Manana ny zon'ny olona tsotra izy ireo, afaka mivezivezy, miasa misy fifanarahana arak'asa maharitra, mandova, manana fananana ary mandray anjara mavitrika amin'ny fiainana sosialy amin'ny fireneny, mandray anjara amin'ny fivoarany.
Manan-danja lehibe ho an'ny firenena ihany koa ny fanoratana ny zaza teraka. Izany dia fototra anaovana ny antontan'isan'ny mponina, izay manome ny tarehimarika ilaina amin'ny fanarahana maso ny fivoaran'ny fitsaboana sy ny fitomboan'ny olombelona, ao anatin'izany ireo Tanjon'ny Taonarivo ho an'ny Fampandrosoana (MDG) maro.
GV: Amin'ny firenena aiza avy ny tetikasa no tafatsangana ary inona no antony?
EM: Ny tetikasa dia tafatsangana amin'ny firenena rehetra izay misy mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ny Fikambanan'i Sant'Egidio: eo amin'ny firenena miisa 40 eo ho eo manerana an'i Afrika atsimon'i Sahara, Azia ary Amerika Latina. Hazavain'ny mpikambana ny maha zava-dehibe ny fanoratana ny zaza teraka ho an'ireo fianakaviana izay ampiany amin'ny alalàn'ny sampan'asa maro (sekoly mampianatra fandriampahalemana, tetikasa DREAM ho an'ny fitsaboana ny SIDA, toeram-pisakafoana ho an'ny ankizy tsy ampy sakafo, fanampiana ara-tsakafo sy fanohanana ny ankizy eny an-dalam-be, fanampiana ireo boka sy ny fianakaviany) ary matetika dia manampy azy ireo amin'ny fanaovana ny kopia nahaterahana. Mikarakara lanonana izy ireo eny amin'ny tranodaba sy ny tanàna madinika hanazavana amin'ireo ray aman-dreny sy ankizy ny maha zava-dehibe ny fanoratana ny zaza teraka sy ny fomba fanaovana izany. Mampiroborobo ny fahatsiarovantena amin'ny alàlan'ny fanentanana eny anivon'ny sekoly ambaratonga voalohany, toeram-pitsaboana sy hopitaly fiterahana izy ireo.
Any amin'ny firenena afrikana vitsivitsy, ny tetikasa BRAVO! dia miara-miasa amin'ny manam-pahefana eny an-toerana mba hampiroborobo ny fanaovan'ny mponina rehetra kopia nahaterahana. Miaraka amin'ireo manam-pahefana voakasik'izany, ny fikambanana dia manangana paikady mba hiantohana fa ny olon-drehetra izay mbola tsy manana kopia nahaterahana dia nanao izany ary mba hanatsarana ny sampandraharaha mikarakara ny fanaovana kopia ka amin'ny ho avy dia hanaovana kopia avy hatrany ny zaza vao teraka rehetra.
Any Borkina Faso, ny fanentanana nataon'ny tetikasa BRAVO! dia nitarika olona miisa 3,5 tapitrisa (eo amin'ny ampahefan'ny mponina eo ho eo) nanao kopia nahaterahana, ary amin'izao fotoana ny BRAVO! dia nanao fanekena hametraka fomba fiasa amin'ny alalàn'ny fanofanana ny mpiasa, fanohanana ny birao fanaovana kopia eny an-toerana ary fanapariahana ny fanentanana manerana ny firenena.
Any Mozambika, ny BRAVO! dia mampiroborobo ny fanaovan'ny mponina kopia nahaterahana ao Nampula, manana mponina miisa 4,2 tapitrisa, ary faritra be mponina indrindra ao amin'io firenena io , ary manofana ny mpiasa ao amin'ny distrika. Foibe roa vaovao fanaovana kopia nahaterahana no efa tafatsangana amina faritra ambanivolo ary hisy foibe hafa hisokatra atsy ho atsy. Amin'izay dia mba mora kokoa ny fanaovana ny kopian'ireo zaza vao teraka, sady araraotina fa maimaim-poana.
EM: Ny olana dia mifandraika indrindra amin'ny fielezan'ny tranga tsy fanaovana kopia nahaterahana. Amin'ireo zaza 150 tapitrisa teraka isan-taona, ny 51 tapitrisa – mihoatra ny iray ampahatelony – dia tsy nanaovana kopia nahaterahana. Iray amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana efatra dia manana taham-pisoratana ny zaza teraka latsaky ny 50 isan-jato.
Aty Afrika atsimon'i Sahara, ny tahan'ny fanoratana ny zaza teraka dia ambany indrindra maneran-tany, eo amin'ny 55 isan-jato eo ka hatramin'ny 67 isan-jato ny fitambaran'ny zaza teraka tsy voasoratra. Izany hoe, vinavinaina ho eo amin'ny zaza roa ao anatin'ny telo no tsy voasoratra rehefa teraka.
Ilaina ny fanokanan'ny fanjakana vola ho an'io sehatra io mba hahazoana antoka fa mampiasa an'io fomba fanaovana kopia nahaterahana io ny olom-pirenena rehetra, fa tena ilaina ihany koa ny fahatakaran'ny mponina ny maha-zava-dehibe ny fanaovana kopia nahaterahana mba hahazoana antoka fa voahaja ny zon'olombelona, hampiroboroboana ny dikan'ny maha-olom-pirenena sy ny fandraisana anjara, ka ny tsirairay dia hahatsapa hoe tsy ao anatina fianakaviana na foko fotsiny ihany, fa koa ao anatina fivondronana lehibe kokoa eo amin'ny sehatra nasionaly ary hahazo ny dikan'ny maha-olom-pirenena izay mizara ho avy iraisana.
GV: Inona ny vokatra ateraky ny krizy any amin'ny firenena Tandrefana amin'ny tetikasa?
EM: Ny krizy ara-toekarena dia niteraka vokany lehibe eo amin'ny sehatra fanampiana iraisam-pirenena, ary miha-sarotra kokoa ny mahazo famatsiana ara-bola. Anisan'ny hery iray ananan'ny tetikasa dia noho izy maharitra satria, taorian'ny dingana voalohany izay nampifanarahana ny rafitra tamin'ny filàn'ny mponina, ny fanjakana dia mandray an-tànana ny lany amin'ny fomba fanaovana kopia nahaterahana.
Manaraka izany, tao anatin'ny taona vitsivitsy lasa izay, ny vondrona iraisam-pirenena dia nahatsapa bebe kokoa ny filàna ny fanaovana kopia nahaterahana noho izy fototry ny demokrasia ary fitaovana entina handrindrana sy handrefesana ny fivoarana ara-pahasalamana, ara-tsosialy ary ara-toekarena. Ny tetikasa BRAVO! dia nahazo fanohanana avy amin'ny Praiminisitra Italiana sy ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny any Alemana. Ny ankabeazan'ny famatsiana ara-bola anefa dia avy amina mpanohana tsy miankina any Eoropa, fikambanana Italiana vitsivitsy ary ny Kindermissionswerk, fikambanana ao amin'ny Fiangonana Katolika Alemana manampy ny zaza sahirana .
GV: Misy zavatra hafa tianareo ampitaina amin'ny mpamaky antsika ve?
EM: Tao anatin'ny taona vitsivitsy lasa izay, noho ny BRAVO! dia ankizy maro no hitanay niverina an-tsekoly ary fianakaviana maro nahita tombontsoa vaovao. Nisy renim-pianakaviana izay, noho ny fahazoany kopia nahaterahana, dia nahazo taratasy fahazoan-dàlana hivarotra, ary raim-pianakaviana nahazo fahazoan-dàlana hitondra fiarakodia. Mahafinaritra ny mahita ireo vokatra voalohan'ity asa ity sy ny mahafantatra fa nanampy niaro ain'ankizy maro izahay, izay tsy vitsy no tsy ho fantatray mivantana mihitsy. Karazana fiarovana hanaraka azy amin'ny fiainany iray manontolo izany.